ဟော့ပေါ့လည်း(၁၈၀၀) ၊ မာလာရှမ်းကောလည်း(၁၈၀၀) ဆိုတော့ကြွေပြီလေ ? – FoodiesNavi
ဟော့ပေါ့လည်း(၁၈၀၀) ၊ မာလာရှမ်းကောလည်း(၁၈၀၀) ဆိုတော့ကြွေပြီလေ ?
By yin sandi On June 4, 2018 0
မာလာရှမ်းကောအသားနဲ့ကို တစ်ပွဲ(၂၅၀၀)ကျပ် ၊ ဟော့ပေါ့တစ်အိုး(၁၈၀၀)ကျပ်တဲ့ ? အိုးမိုင်ဂေါ့ဒ် နားကြားများမှားလေသလား ပုံမှန်အနည်းဆုံးငွေ(၇၀၀၀)လောက်မှမရှိရင် စားလို့မရနိုင်တဲ့ မာလာရှမ်းကောနဲ့ဟော့ပေါ့ကို ဒီလောက်ဈေးလေးတွေနဲ့ စားနိုင်မယ်ဆိုတာ တကယ်တော့အိပ်မက်မဟုတ်ပါဘူးနော်။ Sweet & Spicy ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးမှာ ဒီလိုမျိုးရှယ်တန်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ မာလာရှမ်းကောနဲ့ ဟော့ပေါ့ကို အရသာရှိရှိစားနိုင်မှာပါ။
ဟော့ပေါ့ကိုအရွက်စုံပွဲကြီးနဲ့မှ (၁၈၀၀)ကျပ်ပဲကျမှာပါ။ ဟော့ပေါ့ဟင်းည်ရဲ့အရသာကလည်း လုံးဝပြောစရာမလိုအောင် ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့တကယ်သင့်တင့်အရသာကိုရတော့ တန်တယ်လို့ပြောရမယ်။ ဟင်းရည်ကိုလည်း လိုသလိုထပ်ထပ်ဖြည့်ပေးတော့ လုံးဝရှယ်ပဲ။ တစ်ပွဲနဲ့မလောက်လို့အသီးအရွက်တွေ ထပ်ထည့်ချင်ရင်လည်း တစ်ပွဲ(၂၀၀~ ၃၀၀ကျပ်)ပဲပေးရတယ်။ အရွက်အသီးလည်းတော်တော်လေးစုံတယ်။ အသားတွေထည့်စားချင်တယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ပွဲကို(၈၀၀~၂၀၀၀ကျပ်) အထိပဲပေးရတော့ ? တော်တော်ဈေးတန်တယ်ပြောရမယ်။
မာလာရှမ်းကောကလည်း အသီးအရွက်နဲ့စားမယ်ဆို (၁၈၀၀)ကျပ်ပဲပေးရတယ်။ အသားနဲ့စားမှ(၂၅၀၀)ကျပ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုတွေတောင်တန်တာလဲကွယ် ? အရသာကတော့ အရမ်းကြီးမထူးကဲပေမယ့် သူ့ဈေးလေးနဲ့သူတော့ ကောင်းတယ်ပြောရမယ်။ Orange Juice လေးကလည်း Free တိုက်သေးတယ်ရယ် ။နေရာထိုင်ခင်းလေးကလည်း ဈေးတွေနဲ့မလိုက်အောင် သပ်ရပ်သန့်ရှင်းပြီးအဲကွန်းလေးနဲ့ ? ဒီလိုဈေးတန်ပြီးထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ Sweet & Spicy ရဲ့လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၆/၈) ၊ B1 ၊ ဗျိုင်းရေအိုးစင်လမ်း ၊ တာမွေမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ နေ့လည်(၁၁)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source: www.facebook.com/sweet&spicy
သံဖြူဇရပ်မြို့က နာမည်ကြီး”ပင”ရေစိုလက်ညှစ်မုန့်တီကို ရန်ကုန်မှာတင်စားလို့ရပြီနော်